राजनीति भनेको सिद्धान्त, विचार र आस्थाको संगम हो, तर ओलीमा आफ्नो सनकलाई सबैको इच्छा ठान्ने तुच्छ प्रवृत्ति छ – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
१६ बर्षे युवतीलाई जवरजस्ती करणी आरोपमा एक युवक पक्राउ
प्रतिबन्धित विप्लव नेकपा संग वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को नेतृत्वमा २ सदस्यी वार्ता समिति गठन
सुन प्रतितोला १७ सय रुपैया घट्दै आज ८७ हजारमा किनबेच
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढ्न थाल्यो
अरुण बराल/सन्त गाहा मगर
केपीजी सम्पूर्णरुपले फ्लप हुनुभयो भन्ने नै देख्छु किनभने, उहाँले चालेको कदमै गलत थियो
कोभिसिल्ड खोप लगाएपछि शरीरमा एन्टिबडी नबन्दासम्म कोराना संक्रमणको जोखिम रहने
रेसिङ कार दुर्घटना हुंदा एक जनाको मृत्यु
प्रविन बांस्तोला हत्या प्रकरणमा घरधनी रमेश गिरी पक्राउ
प्रि–ओपनिङमा ३ अंकले बढेको नेप्से तिब्र गिरावटका बीच ३.१२ प्रतिशत अर्थात ७९.७४ अंकले सेयर बजार घट्यो
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ आज बांडफांड
तारकेश्वरको साङ्लामा कुखुरा फर्ममा फेरि बर्डफ्लु देखियो
राजनीतिक विश्लेषण तथा सहित्यकार, नारायण ढकाल
प्रकासित : ३ माघ २०७७, शनिबार
२ माघ, काठमाण्डौ । नेपाली निबन्ध र आख्यानमा राजनीतिक स्वाद दिने अग्रणी लेखकमा पर्छन् नारायण ढकाल । तीनदशक बामपन्थी राजनीति गरेका उनी २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ बाट संसद सदस्य बनेका थिए ।
ढकाल काठमाडौंको काँठ क्षेत्र मूलपानीका रैथाने हुन् । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का कर्मठ सदस्य उनी दुई दशकयता भने एक किनारमा उभिएर सुस्केरा मार्दै नेपालको वाम राजनीति नियालीरहेका छन् ।
‘दुर्भिक्ष’, ‘प्रेतकल्प’, ‘वृषभ वध’ लगायत पाँच उपन्यास, छ कथासंग्रह, दुई बालकथा र दुई निबन्धसंगालोका स्रष्टा ढकाल वामपन्थी लेखकका रूपमा चिनिन्छन् । उनको कलमले सधैं नेपाली राजनीतिको कुरूपतामाथि प्रहार गरेको हुन्छ । आफूलाई ‘बागी लेखक’ मान्ने ढकाल जनताका प्रतिनिधिले खेलेको संविधान च्यात्ने कृत्यलाई अक्षम्य मान्छन् ।
अहिले केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै ढकाल सांसद बनेकोजस्तै मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा छ । संसद विघटनमाथि पक्ष(विपक्षमा सडक तातिएको छ । संसद विघटनपछिको राजनीतिक परिवेशमा साहित्यकार ढकालसंग अनलाईनखबरका निर्भीकजंग रायमाझीले लिएको अन्तरवार्ता ः हामी यहाँ उतार्न चाहन्छौ ।
केपी ओलीको कदमलाई ‘घप्पु’ भन्नुभएको थियो । खालमा उनी निकै माहिर देखिदैछन् होइन ?
केपी ओलीमा पहिल्यैखि विचारको राजनीति नगर्ने, आफूलाई केन्द्रमा राख्ने, त्यसको लागि झेली जुवा (घप्पु) खेल्ने स्वभाव थियो । राजनीति भनेको सिद्धान्त, विचार र आस्थाको संगम हो, तर ओलीमा आफ्नो सनकलाई सबैको इच्छा ठान्ने तुच्छ प्रवृत्ति छ ।
अहिले प्रतिगामीहरुको साथ लिन राष्ट्रिय राजनीतिमा घाँस हालेका छन् उनले । साना बामपन्थी समूहहरूलाई पनि मिलाएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसलाई पनि अनेक प्रलोभन देखाएका छन् । झेल गरेर एकचोटी जित्न सकिएला, तर जिन्दगीभर झेल गर्न सकिन्न ।
इतिहासमा झेल गर्नेहरूको हार भएको छ ?
मूल्यको राजनीति पछिसम्म रहन्छ । चाणक्यले शासकलाई साम, दाम, दण्ड, भेदसहित चाटुकारको झुण्ड बनाउने तत्त्व भनेका थिए । त्यो केपी ओलीमा शतप्रतिशत लागू हुन्छ ।
ओलीले उत्पादन गरेको राजनीतिक झुण्डले उनलाई बा भन्छ । त्यो झुण्डमा स्वतन्त्र चिन्तन भएका पात्र एउटा पनि छैन । ओलीको मक्सद भनेकै जसरी हुन्छ दाउ आफ्नो पक्षमा पार्ने हो । यसविरूद्ध आवाज रोकिनु हुँदैन । विरोधको स्वर मन्द बन्नु हुँदैन ।
ओली सम्पूर्ण रूपमा अधोगतिमा छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
यो कुरा मैले अहिले होइन, उहाँहरू जेलबाट निस्कँदा नै भनेको हुँ । त्यतिबेला केशव स्थापित र केपी ओलीको राजनीतिक चर्चा एकै थियो । स्थापित कार्यकर्ता थिए, केपी ओलीमा नेतागिरी बढी थियो । त्यसपछि त ओलीले आफ्नो जत्था बनाइहाले । मार्गदर्शन, सिद्धान्त र आदर्शभन्दा सत्ताकेन्द्रीत गुट बनाए ।
बिडम्बना भन्नुपर्छ, उनले गृह मन्त्रालयजस्तो राज्यको अंग चलाउन पाए । मदन भण्डारीको मृत्युपछि मदन भण्डारी फाउण्डेसन बनाए । उनलाई विदेशी सहायता पनि मिल्दै गयो । यसरी आजको घटनासम्म आइपुग्न लामो तयारी गरे ।
एउटै पार्टीमा रहेका केपी ओली र तपाईको व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो छ ?
म व्यक्तिगत तहमा केपी ओलीको नीजि चरित्रको भत्र्सना गर्न चाहन्नँ । एउटै आन्दोलनमा काम गरेको हुनाले चिनजान नहुने त कुरै भएन । नवौं महाधिवेसनपछि भने विशेष रूपमा भेटेको छैन ।
कुनै कार्यक्रम, सम्मेलनमा भेट हुने हो । एउटा भाषणमा उनले ‘नारायण ढकाल स्पष्ट बोल्ने मान्छे हो’ भनेर मेरो तारिफ गर्दै आफू हाकाहाकी बोल्ने मान्छे भएको दाबी गरेका थिए । पहिले जस्तो सँगै बस्ने, कुरा गर्ने अवस्था छैन अहिले । उनी स्वार्थ समूहको घेरा बनाएर बसेका छन् ।
एक समय उही पार्टी बचाउ अभियानमा पनि लागे । तर, जनतामा अधिकार पुर्याउने नभई आफैंभित्र भागबण्डा गर्ने राजनीति गरेका रहेछन् । जनता र नेतृत्वबीच अन्तरविरोध बढाउने खेल खेलेका रहेछन् ।
मलाई केही लिनुदिनु छैन । यसैले उनीविरुद्ध बोल्न डर छैन । यहाँ संविधान च्यातिएको छ, दिउँसै डकैति भएको छ । यस्तो शासक भएको ठाउँमा त बस्न पनि ग्लानी हुन्छ ।
यस्तो जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा लेखक-साहित्यकारको भूमिका के हुन्छ ?
साहित्यकारको मुख्य भूमिका लेख्नु हो । मुलुकलाई संकट परेको बेला लेख्न छोडेर संघर्षको मोर्चामा आउनुपर्छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । लेखक उराल फक्स, कवि गार्सिया लोर्का लेख्दै, संघर्षको मैदानमा होमिँदै आए । हाम्रोमा पनि सबै लेखक त नआउलान्, प्रगतिशील लेखक(साहित्यकार भने आउनैपर्छ ।
अहिलेको नागरिक समाजको आन्दोलनमा तपाईं पनि हुनुहन्छ ?
नागरिक समाजले संकट आएपछि मात्र कराउने होइन, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अङ्गहरू बिग्रिरहँदा पनि बोल्नुपर्छ ।
आजको नागरिक समाजको आवाजलाई समर्थन गर्दैगर्दा पनि बामपन्थी आन्दोलनप्रति मेरो धुँवादार समर्थन छ । म त्यही आन्दोलनको जगबाट आएको हुँ । यसैले म बोलेर, लेखेर विरोध गरिरहेको छु ।
नागरिक समाजले गरेको काममा पनि मेरो समर्थन छ । त्यसमा आबद्ध भएकाहरू निष्पक्ष, प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । उनीहरू झन् बलियो नभए विरोधको आवाजलाई दबाईन्छ ।
राजनीति गर्नेहरु प्रशंशकको भिड खोज्छ, लेखक आलोचकको । मलाई निर्वाचन जित्नु छैन, त्यसैले भोट घट्ला भन्ने पीर छैन । यही कारण सधैंंभरि बागी विद्वानहरुलाई सघाउन चाहन्छु ।
प्रतिगमनको सवालमा लेखक-साहित्यकारकै पक्ष(विपक्ष धार देखिएको छ नि !
हाम्रो देशमा अधिकांश लेखक इमानदार छैनन् । सरकारी नियुक्ति खाएका, आशामा रहेका साहित्यकारहरु ओलीको पक्षमा होलान् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएकाहरू त राम्ररी लेख्नै नजान्ने छन्, तिनको समर्थनले केही हुँदैन । तिनले त खुलेर केपी ओली जिन्दावाद भन्न पनि सकेका छैनन् । उनीहरु चुनावको कुरा बेठीक होइन भन्दै बसिरहेका छन् ।
बहुसंख्यक लेखक-साहित्यकार संसद विघटनको विपक्षमा छन् । उनीहरू सम्पूर्णतः यो प्रतिगमनको विरोधमा छन् ।
यस्तोबेला राजनीतिमै सक्रिय साहित्यकारहरूको बढी दायित्व हुने होइन र ?
दायित्व भनेकै विरोध हो । फेरी, लेखकहरुको त्यस्तो भयानक शक्ति पनि हुँदैन । राजनीतिक कदम सच्चिन राजनीतिक क्षेत्रबाटै बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रवादी होइन, दलतन्त्रवादी बनिरहेका छन् । दलहरू भित्रै पनि प्रतिगमन
यसैले हाम्रो राजनीतिभित्रको धेरै कुरा सच्चिनुपर्छ । यसका लागि लेखकहरूले नैतिकता बचाएर, आफनो उन्मुक्त मतिष्क चलाउँदै, बोल्दै जानुपर्छ । धैर्यतापूर्वक विरोधको स्वर उराल्नपर्छ । नयाँ व्यवस्थाको लागि पहल गर्नुपर्छ ।
तपाईंको दृष्टिमा आगामी राजनीतिक परिदृष्य कस्तो होला ?
संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि हुने त संसदीय खेल नै हो । भएन भने दलहरू निर्वाचनमा जान्छन् । यसमा अदालतको निर्णय त छँदै छ ।
अबको आवश्यकता भनेको चाही राजनीतिक पुनर्संरचनाको हो । वैकल्पिक शक्ति आउन अँधेरो समय छ । ‘तमसोमा ज्योर्तिगमय’ भनेझैं उज्यालो खोज्दै हिँड्नुको विकल्प छैन ।
ओलीले भनेझैं वैशाखमा चुनाव हुन्छ त ?
उनले चुनाव गर्नका लागि होइन, संविधान च्यात्नका लागि यो घोषणा गरेका हुन् । भइहाले पनि संविधान नै हाकाहाकी च्यात्नेले निस्पक्ष चुनाव गराउँछ भन्ने के भर ! धाँधलीको बाटो समात्दैन भने आधार के ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालका प्रधान्मन्त्रीकै नेतृत्वमा भष्ट्राचार भएको कुरा बाहिर ल्याएको छ । ओलीले राज्यका सबै अंगलाई कब्जामा लिएका छन् । त्यसको लाभमा मोटो रकम पनि जम्मा गरेका होलान् ।
एउटा लेखक र राजनीतिक चिन्तकको हिसाबले आम नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, म अरूलाई सम्बोधन गर्ने हैसियतमा छैन । आफैंलाई भने नैतिक धरातलमा उभिरहन सचेत पार्छु । आफू जोगिरहन सक्नुपर्छ । म आफैंलाई आह्वानन गर्छु तेरो नैतिकतकामा कसैले प्रश्न उठाउन नसकोस् ।
समाज र राष्ट्रको हितमा केही गर्न सकौं । त्यसबाहेक असत्य र खराबको विरोधमा उभिरहन, यो प्रतिगमनको विरोध गरिरहन सधैं प्रतिबद्ध छु ।
प्रकासित : १८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार
आगामी २०७८ सालको विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र १० महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने